All Posts | Easydevboards
Eagle PCB Design Software (Version 8.0.2 or Later) ကို အသုံးပြုပြီး Schematic Diagram တခု ဘယ်လို ရေးဆွဲမလဲဆိုတာကို လေ့လာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Eagle PCB Design Software ...
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တွေ Electromechanical Relay ကိုပဲ သုံးကြတာပါ။ သူ့ကို အလုပ်လုပ်မလုပ်စမ်းသပ်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ Power Supply ပေးလိုက်ရင် အသံမြည်တာကိုး။ Solid State Relay ကိုတော့ Electromechanical Relay တွေလို ...
Windows ပေါ်မှာ Raspberry Pi Image ကို SD Card ရေးတဲ့ နည်းကို ဒီနေရာ မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ Apple က ထုတ်တဲ့ Macbook သုံးတဲ့ သူတွေ ...
8x8 Dot Matrix Module တခုကို အသုံးပြုပြီး ရေးထားတဲ့ Project ကို ဤ နေရာ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဒီ Project မှာ 8X32 Dot Matrix ကို သုံးပြီး Project ...
မိမိ အသုံးပြုမည့် Wireless နည်းပညာကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် မည်သည့် နည်းပညာက မိမိ Application အတွက် အသုံးဝင်သည်ကို အခြေခံအားဖြင့် သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စဥ်းစားရသည်။ ၁) အကွာအဝေး ၂) ...
Wireless ကို အကြမ်းအားဖြင့် ၂ မျိုးခွဲနိုင်သည်။ ၁) proprietary ၂) International Standard proprietary က ထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောပင်။ ဘယ် နည်းပညာကိုမှ Follow လိုက်နာရန်မလိုအပ် International Standard ...
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ tone( ) function ကို အသုံးပြုပြီး7keys ပါတဲ့ Keyboard တစ်ခု လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ Lab Bench Pane ပေါ်မှာ Piezo Speaker တစ်ခုနဲ့ Push ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Piezo Speaker လို့ ခေါ်တဲ့ Speaker သေးသေးလေးနဲ့ Arduino မှာ ပါတဲ့ Tone( ) function ကို အသုံးပြုပြီး အသံမြည်အောင် စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါမယ်။ ပထမဆုံး Lab Bench ...
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ Computer က ပို့လိုက်တဲ့ Serial Command တွေကို အသုံးပြုပြီး LED ၂လုံး၊ DC Motor တစ်လုံးနဲ့ Servo Motor တစ်လုံးကို ထိန်းချုပ်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Lesson 3.3 ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Serial ကနေ ရတဲ့ character တွေ ကို String အဖြစ်နဲ့ ပြောင်းပြီး Properly Formatted Command တွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Command တစ်ခုရဲ့ အစကို ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Arduino ကွန်ပျူတာကနေ Serial port ကို အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကနေ Serial port ကို သုံးပြီး ပို့လိုက်တဲ့ Data ကို ပထမဆုံး Serial.available( ...
Arduino ကို ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးပဲ Hardware နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် Debug လုပ်လို့ မရတဲ့အတွက် အထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ခလုတ်တစ်ခုနဲ့ LED တစ်လုံးနဲ့ကို Input / ...
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ DC Motor Control ကို Push Button Switch ၅ခုနဲ့ ထိန်းချုပ်ပြီး မော်တာ အမြန်နှုန်းကို Speedometer လိုမျိုး Servo Arm နဲ့ ပြပါမယ်။ Push Button ...
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ DC Motor Control အနှေးအမြန်ကို Analog Slider နဲ့ ထိန်းချုပ်ပြီး Speedometer လို ပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင် Servo Arm နဲ့ ပြပါမယ်။ UnoArduSim မှာ ပုံတွေကို ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Servo motor ကို Analog Slider နဲ့ ထိန်းကြည့်ပါမယ်။ Configure -> I/O Devices ကနေ 1 Analog Slider နဲ့ 1 Servo Motor ...
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာ Analog Input ကို သုံးနည်းကို ပြခဲ့ပါတယ်။ Analog Input ရှိရင် Analog Output ရော မရှိဘူးလားလို့ သိချင်ကြမှာပါ။ Arduino မှာ0to 5V ...
Arduino Uno ကို Lab Bench Pane ထဲကလို ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ညာဖက်အောက်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ pin ၆ခုဟာ DC voltage0to 5V ကို0to ...
ရေတိုင်ကီထဲမှာ ရေနည်းနေရင် ရေဖြည့်ပေးပြီး တိုင်ကီပြည့်ခါနီးရင် ရေပြန်ပိတ်သွားမယ့် ပုံစံမျိုးကို UnoArduSim နဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ ရေဘယ်လောက် ရှိနေပြီဆိုတာကို သိဖို့ Float Level Switch လို့ ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းကလေးတွေကို သုံးလို့ ရပါတယ်။ ...
Lesson 1.2 ထဲက Arduino Sketch ကို အခြေခံပြီး ခလုတ်နှိပ်မထားရင် LED လင်းနေပြီး ခလုတ်နှိပ်ထားရင် မီးမှိတ်သွားအောင် Code ကို ပြောင်းရေးပါ။ Lab Bench Pane က ခလုတ်တွေ၊ ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Push Button တစ်ခုနဲ့ LED တစ်ခုကို သုံးပြီး Digital Input နဲ့ Output အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ ပထမဆုံး Configure -> I/O Devices menu ကနေ ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Arduino Uno ရဲ့ Digital Input/Output (I/O) Pin တွေကို စတင်အသုံးပြုကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Arduino Uno ရဲ့ USB port ကို ဘယ်ဖက်မှာ ထားပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် ...
Arduino Program တွေကို Arduino Sketch လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Arduino Sketch တွေက သာမန် C/C++ Program တွေနဲ့ ဘာကွာသလဲဆိုရင် int main( ) ဆိုတဲ့ Function ...
UnoArduSim ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး တစ်နေရာရာမှာ Unzip လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် UnoArduSim.exe ဆိုတဲ့ file ကို Run လိုက်ရင် simple.ino ဆိုတဲ့ Arduino Program ကို ဖွင့်ပြီးသား ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ...
How to readatransistor?
လွန်ခဲ့သော ၁၉ရာစု ကာလများက Internet မထွန်းကားသေးသော အချိန်တွင် Transistor ၁ လုံး Base, Collector, Emitter များသိရန်အတွက် Analog Meter အသုံးပြုတိုင်းတာခဲ့ကြရသည်။ Internet သုံးစွဲလာနိုင်သည့်နောက်တွင် တိုင်းတာစရာမလိုတော့ပဲ Datasheet ...
1) Path Through Hole Type Capacitor ဖတ်နည်းက Resistor နဲ့ မတူပါဘူး။ အချို့ Capacitor တွေမှာ တန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်ရေးပေးထားလို့ အလွယ်တကူပဲ ဖတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Capacitor ရဲ့ ...
ယခုအခါတွင် Resistor Package ကို ပုံစံ ၂ မျိုးနှင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၁) Path Through Hole (PTH) ၂) Surface Mount Device (SMD) ဆိုပြီး ၂ ...
Digital Electronics ဆိုတာ Voltage တွေကို 1 နဲ့0တန်ဖိုးနှစ်မျိုး အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အဲဒီ 1/0 ပေါ်မှာ တွက်ချက်တုံ့ပြန်မှုတွေ ပြုတဲ့ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာတွေကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Lesson 0.2 – UnoArduSim UnoArduSim ကတော့ Queen’s University, Canada က အငြိမ်းစားယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ Associate Professor Stan Simmon ရေးထားတဲ့ Arduino Uno Simulator ...
Arduino ဆိုတာ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် စီမံထားတဲ့ “စမ်းသပ်တီထွင် နမူနာ ပြုလုပ်ခြင်း စနစ်” (Prototyping Platform) ဖြစ်ပါတယ်။ Arduino မှာ Program ရေးပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို စမ်းသပ်တီထွင်ကြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဒီ Tutorial မှာတော့ ON/OFF Buttons လေးထည့်ပြီး Arduino ဆီကို ပို့ပါတော့မယ်။ နောက်ဆုံး Android apk လုပ်နည်းပြောပြသွားမှာပါ။ ၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ ON Button နှင့် OFF Button ...
Tutorial မှာ Blocks တွေ ချိတ်ဆက်ပြီး Android Programming ရေးနည်းကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ Bluetooth ကို ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် List Picker ရဲ့ BeforePicking မှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ...
၁) http://ai2.appinventor.mit.edu/ ကို Internet Explorer (သို့) Chrome သုံးပြီး ဖွင့်ပါ။ ထို့နောက် မိမိ Gmail User Name, Password တို့ဖြင့် Login လုပ်ပါ။ ၂) Project Page ...
Embedded Systems - Shape The World Online Course ဟာ The University of Texas at Austin က သင်ပေးတဲ့ Online Course ၁ခုပါ။ Online ...
ဒီ Project မှာ NodeMCU (ESP8266) ကို သုံးပြီး Web Server ရေးနည်းကို လေ့လာသွားမှာပါ။ Arduino IDE ကို ပဲ အသုံးပြုထားပြီး NodeMCU, DHT22 (Temperature and ...
MIT App Inventor2Android Programming
MIT App Inventor2Android Development စနစ်သည် MIT (Massachusetts Institute of Technology) မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော Android App ရေးသားသော IDE စနစ်တခုဖြစ်သည်။ အခြား ...
Arduino 8×8 LED Matrix using Max7219 Module
ဒီ Project မှာ 8x8 LED dot-Matrix ကို သုံးနည်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ဤ Project တွင် Module ၁ ခု ထဲ သာ အသုံးပြုထားသော်လည်း လက်တွေလုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် LED Driver ...
Arduino ကို လည်း လေ့လာ Certificate လေးများ တခါထဲ ယူချင်သူများအတွက် Coursera, University of California, Irvine. မှာ သင်ကြားပေးနေသော An Introduction to Programming the Internet of ...
ControlaServo Motor Using Bluetooth
ဒီ Project မှာ Servo Motor ၁ လုံးကို Bluetooth မှ တဆင့် Android App ကို အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်နည်းကို ပြောပြပါမည်။ Arduino Uno, HC-05 or ...
www.arduino.cc မှ တဆင့် Arduino Tutorial များကို ဖတ်ရှုရန် ခက်ခဲသူများအတွက် pdf version ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ...
Arduino – GenuinoProducts
Arduino အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ အခြေခံ Entry Level အတွက် Uno, 101, Micro တို့ဖြစ်ပြီး Enhanced Features တွေအတွက်တော့ Mega နဲ့ Zero ကို သုံးရပါမယ်။ Internet ...
NodeMCU — An open-source firmware based on ESP8266 wifi-soc.
ESP8266 IC သုံး NodeMCU ကို Connected Device တွေအတွက် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီး။ သူ့ကို IoT (Internet of Things) အတွက် အဓိကထားထုတ်လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် နေရာ တော်တော်များများမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ NodeMCU ...
Arduino – ArduinoMKR1000
Arduino MKR1000 ကို IoT Project များလုပ်ရန်အတွက် Arduino မှ အသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Arduino က ထုတ်လုပ်တဲ့ အတွက် Arduino IDE ကို သုံးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Atmel ...
Raspberry Pi3on sale now at $35 – Raspberry Pi
A 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (~10x the performance of Raspberry Pi 1) Integrated 802.11n wireless LAN and Bluetooth ...
Arduino – ArduinoBoardZero
Source: Arduino - ArduinoBoardZero ဒီနေ့ တော့ Arduino Zero သတင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ Arduino Zero ဆိုတာ တကယ်တော့ Arduino Uno ကို ထပ်ပြီး extension လုပ်ထားတဲ့ 32 ...
Arduino Bluetooth + Android Communication
ဒီ Project မှာ Android Phone Application ကနေ Arduino + HC-05 or HC-06 Bluetooth Module ကို ဘယ်လို ချိတ်ဆက် အမိန့်ပေးခိုင်းစေနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြသွားပါမယ်။ Smart Car ...
Introduction to SIMCOM900 Arduino Shield
ဤပိုစ့်တွင် SIMCOM900 Arduino Shield အခြေခံအကြောင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ SIMCOM900 ကို Arduino မှ အခြား လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာများသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံယူခြင်းဖြင့် Automatic Control System များအတွက် အသုံးပြု ...
Automatic Water Level Controller (Upper Tank and Ground Tank)
Water Level Controller ဆိုတာ မြန်မာလို အလို အလျှောက်ရေတင်စက်ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုက်ခန်းတွေမှာ အပေါ်ကန်၊ အောက်ကန်လို ၂မျိုးတွဲသုံးထားပါတယ်၊ အောက်ကန်ရေပြည့်မှ သာ အပေါ်ကန်ကို ရေတင်လို့ရပါသည်။ ဒီ Project မှာ ရေအနေအထားကို တိုင်းတာတဲ့ ...
PCB LAYOUT GUIDELINE Download Download, PDF Format (235kB) (1) 20H Rule The 20-H ...
802.11 Standard 802.11 Standard Standard Year Band Bandwidth Modulation Antenna Technology Data Rate 802.11b 1999 2.4GHz 20MHz CCK --- 11Mbps 802.11a 1999 ...
Frequency Frequency ဆိုတာ RF(Radio Frequency) တစ်ခုလုံးရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ Microwave Theory ပိုင်းမှာလည်း Frequency တန်းဖိုးက အရေကြီးပြီး ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ တွက်ချက်မှုတွေမှာ အမြဲနေရာယူနေတာပါ။ Frequency ဆိုတာနဲ့ sin ...
Valor Universal ODB++ Viewer Software (Free)
Download: Valor Universal ODB++ Viewer Software (Free) ...
How to choose CAPACITOR for High Frequency Application
Capacitor At RF,acapacitor may be modelled as shown below; ...
Overview Of EMC Electromagnetic interference isaserious and increasing form of environmental pollution. The large number of electronic devices ...
Reduction of Common Mode (CM) and Differential Mode (DM) radiated emission
Differential Mode Radiation can be reduced by 1) Reducing the magnitude of the current 2) Reducing the frequency of harmonic ...
English လိုကတော့ "All radiation is caused by accelerating charges which produce changing electric fields. And due to Maxwell's Equations, changing ...